Shaqaalaha ka howl gala Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo shada joojiyay. – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 August 29 Shaqaalaha ka howl gala Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo shada joojiyay.
Shaqaalaha ka howl gala Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo shada joojiyay.
Posted on August 29, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, August 29, 2016: Qaar ka mid ah Shaqaalaha ka howl gala Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa saaka shaqo joojin iyo banaan bax ah ka sameeyay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha, iyagoo ka cabanaya shirkada Favori ee gacanta ku heysa howlaha garoonka diyaaradaha.
Shaqaalahan ayaa ka cabanaya in muddo aanay qaadan wax mushaar ah, iyadoo mudnaanta koowaad la siiyo dadka ajnabiga ee ka shaqeeya Garoonka Muqdisho.
Qaar ka mid ah shaqaalaha dibad baxa sameeyay oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in lagu xadgudbo xuquuqdooda, isla markaana saacado badan shaqeeyaan.
“Waxaa ka cabaneynaa in mushaar aanan qaadan waqti dheer, mar walba mudnaanta waxaa la siiyaa dadka Ajnabiga ah, xuquuqda uu shaqaale leeyahay ma helno, waxaa shaqeynaa saacado dheer, fasax ma jiro, waxaa inoo sii dheer in qofkii soo daaha inuu ganaax la kulmayo, dhibaatooyinkan muddo ayay soo jiitamayeen”ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalihii saaka ku hor banaan baxay garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Sidoo kale shaqaalaha ayaa ka cawday inuu qofka heysta shahaado jaamacadeed iyo mid Dugsi sare ay yihiin kuwo isla siman oo mushaarka ay qaataan ay isku mid yihiin, waxaana ay tilmaameen in arrintan ay aheyd mid soo jiitameysay muddo dheer.
“Qofka heysta shahaado Jaamacadeed waxaa la siiyaa 3 boqol oo doolar, markii hore xuquuqda qofka sharciga u yaal ee shahaado jaamacadeed ka baxay waxaa mushaarkiisa ahaa 7 boqol, qofka dugsiga sare ka baxay waa 4 boqol, qof walba wixii la doona la siinayaa, xuquuqdeena cid ka hadleysa ma jirto”ayuu yiri mid ka mid ah dadkii dibad baxayay.
Shirkada Favori ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa gacanta ku heysa garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxaana ka shaqeeya Shaqaale isugu jira Soomaali iyo Ajnabi kuwaaas oo an loo simin xuquuqdooda.
Girls in ICT Day celebrated in Somalia with the launch of an ICT initiative
Duqa Muqdisho oo daahfuray Ololaha Taakulo ee bisha Ramadaan
WOFIJ Congrats IGAD for her inauguration of the Center of Excellence for Preventing and Countering Violent Extremism (ICEPCVE)
Xulka 17-Jirada Soomaaliya oo u soo gudbay kama danbeysta tartanka Bariga iyo Bartamaha Afrika
Dib u Dhiska Ciidanka Xooga Dalka Somaaliyeed? April 30, 2017
From Cooperation to Conflict: The UAE’s Deepening Crisis with Somalia and Djibouti April 26, 2018
Dad Ku Geeriyooday Weerar Ka Dhacay Mandhera October 6, 2016
Shibis oo ku guuleeysatay Doorashada Aqalka Hoose Jowhar December 1, 2016
Golaha Wasiirada oo ansixiyay Hab mideysan ee shatiyada Isgaarsiinta dalka April 29, 2016
Gudoomiyaha Gudiga doorashooynka oo sheegay in ay sameeyeen kormeerayaal caalami ah September 15, 2016
Inkabadan 40-Askari oo loo xiray weerarkii lagu qaaday Hoyga Sanatar Cabdi Qeybdiid December 30, 2017
Mudane Ayad Allawi Oo Khudbad U jeediyey Baarlamaanka Soomaaliya. February 11, 2016
Siilaanyo oo ka carooday War murtiyeedkii ka soo baxay Shirkii IGAD September 14, 2016
Kulan looga hadlayo Sharciga Shaqaalaha Rayidka oo ka furmay Muqdisho March 22, 2016
From Cooperation to Conflict: The UAE’s Deepening Crisis with Somalia and Djibouti
Mayor of Mogadishu launched Taakulo Campaign for the month of Ramadan
Military On The Spotlight As Government Declares Illegal Deal With SKA
January 7, 2016 - 22,413 Views
February 8, 2016 - 9,464 Views
December 20, 2015 - 8,914 Views
November 24, 2015 - 7,777 Views
September 23, 2015 - 7,016 Views
11 guests, 10 bots, 0 members
Girls in ICT Day celebrated in Somalia with the launch of an ICT initiative April 26, 2018
Mayor of Mogadishu launched Taakulo Campaign for the month of Ramadan April 26, 2018
Duqa Muqdisho oo daahfuray Ololaha Taakulo ee bisha Ramadaan April 26, 2018
Military On The Spotlight As Government Declares Illegal Deal With SKA April 26, 2018
Wasiirada Puntland oo amarro ka soo saaray kala gurka shiling Soomaaliga. September 8, 2017
Ra’iisul wasaare kuxigeenka dalka oo kormeeray xafiisyada wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee dalka June 6, 2017
TACSI : Cali Maxamuud Ibraahim (Cali Dheere). August 31, 2016
Agaasime Koofi oo la kulmay Safiirka Sweden May 20, 2017
Right mix of skills in new Cabinet to make Somalia ‘great again’ March 17, 2017